Tantara BricMaker |
Ahoana ny fomba hisafidianana ny lafaoro mety mifanaraka amin'ny fepetra eo an-toerana?
Amin'izao fotoana izao, ny kilao lehibe amin'ny biriky sy taila tanimanga voadio ao Shina dia ny lafaoro sy ny lafaoro rotary (lafaoro famindrana mihetsika). Ny tunnel Tunnel dia misy karazany isan-karazany ary azo sokajiana amin'ny toetra samy hafa izy ireo: azo sokajiana ho fizarana lehibe miampita ...
Ahoana ny fomba hanaovana famolavolana lafaoro mety?
Na mety sy lavorary ny famolavolana ny lafaoro, dia mametra mivantana ireo mpampiasa vola ary mametra ny kalitaon'ny lafaoro ihany koa. Amin'ny alàlan'ny fampitahana marobe eo amin'ny tsipika famokarana samihafa, dia hitanay fa ny karazan-akora mitovy sy ny karazana kilao ...